FETÖ | RayHaber | raillynews
Warqada la daabacay Lanbarka 697! Halkan waxaa ku qoran liiska shaqaalihii dib loogu soo celiyay xafiiska TCDD
Iyada oo la raacayo Go'aanka Sharciga No. 697 oo lagu daabacay arrinta rasmiga ah ee Gazette Rasmiga ah, TCDD iyo TCDD Taşımacılık A.Ş. iyo TÜVASAŞ ayaa dib loogu soo celiyey shaqaale 18 ah. Go'aanka cusub ee la sii daayay 697 [More ...]
TCDD: Shaqaalahaas ayaa laga tuuray qarsoodi, ma aha ogeysiis
Agaasinka guud ee TCDD wuxuu sheegay in Kenan Ülk who, oo ka warbixiyay tiro badan eedeymaha FETÖ, laga joojiyay shaqada rayidka sabab la xiriirta eedeymo aan sal laheyn oo ku saabsan shaqaalaha kale. [More ...]
Channel waxay qaadatay magaca Istanbul
U dhaqaaqista xaquuqda magaca Channel-ka Istanbul: Mashruuca Channel Istanbul ee magaca Sakarya FETÖ'den Gökhan Aygen oo ay qabteen shirkaddu waxay ku dhawaaqday in mashruucan ay ka diiwaan gashan tahay Machadka Patent-ka ee Turkiga. [More ...]
IETT ayaa loo magacaabay xarunta 53 ee shuhadada
İETT waxay magacii shuhadada u siisay xarunta 53: İETT waxay magaca Topkapı Metrobus Station u bedeshay Şehit Mustafa Cambaz Station kadib isku daygii afgambiga oo sii waday saldhigga daacada. ETT, iyada oo tixgelinaysa hoyga Shuhadada [More ...]
Qof 1000 ah oo ka socda Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta ayaa la hakiyey: Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan ayaa qiimeyn gaar ah ka sameeyay isku daygii afgambi ee 15 July. Su'aalaha 15 ee ku saabsan isku day afgambi Luulyo [More ...]
Halkan ahee-mashaariic in ay calaamadsan 15 sannadkii la soo dhaafay: 15 Sanadkii la soo dhaafay, Turkey noqday mid ka mid ah dalalka ugu dhaqsiyaha badan sii kordhaya ee adduunka .. maal-Giant sameeyey furitaanka heerka-mashruuc ahee sii, waxna lagama. [More ...]
15 July ayaa ku dhacday qaybta gaadiidka
15 Luulyo sidoo kale waxay ku dhacday qaybta gaadiidka: isku day afgambi FETÖ 15 Luulyo 9 ayaa sidoo kale ku dhuftay qaybta gaadiidka, oo si firfircoon ula shaqeysa fasaxa maalinlaha ah ee Ramadaan. Kadib go’aanka dowlada kadib dad fara badan oo shacabka ah [More ...]
Gaadiidka bilaashka ah ee u dhaxeeya Samsun iyo 19.00-01.00
Xaraashka Samsun oo bilaash ah inta u dhaxaysa saacadaha 19.00-01.00: Duqa Magaalada Metrounisyo Yuusuf Ziya Yilmaz, oo sii wadata daawashada dimoqraadiyadda iyadoon la carqaladeyn, ayaa ku dhawaaqay in taraamku uu xor noqon doono inta u dhexeysa 19.00-01.00 inta lagu gudajiro xilliyada dimuqraadiyadda. dimuqraadiyadda [More ...]
Helitaanka Demoqraadiyadeed ee Ilaalinta ee Isagu waa bilaash
Helitaanka Ilaalinta Dimuqraadiyadda ee magaalada İzmir waa mid Bilaash ah: Sida dhammaan keli-talisyada, muwaadiniinta reer İzmir waxay sii wadaan ilaalintooda dimoqraadiyadda ka hor isku dayga afgambiga illaa subaxa hore. Kordhinta xamaasada dadka Izmir maalin kasta [More ...]
Adeegga Tramways ee Samsun ayaa bixin doona adeeg bilaash ah
Adeegyada taraamyada ee Samsunda waxay bixin doonaan adeegyo bilaash ah: Dawladda Hoose ee Samsun, Ilaalada Demoqraadiyadda inay ku biiriso adeegga taraamyada inta u dhexeysa 19:00 iyo 01:00 ayaa ku dhawaaqay adeegga bilaashka ah. July 15 Ururka argagixisada FETÖ [More ...]
5 Bin Railroad Walk to Democracy (Sawir Sawir)
5 kun Railroaders Maarso ee Dimuqraadiyadda: hay'adaha dowliga ah iyo ururada ka shaqeeya waaxda tareenka ee Sivas iyo ururrada shaqaalaha ee ganacsiga tareenka [More ...]